Vista ကဂေါက်သီး | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Vista ကဂေါက်သီး
Vista ကဂေါက်သီး APK ကို
Vista ကဂေါက်သီးအပတ်တိုင်းပြတ်သားထိန်းချုပ်မှုအသစ်သင်တန်းများ၏အဆုံးမဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်, တစ်ဦးရိုးရှင်းသောပေမယ့်ကြော့ mini ကိုဂေါက်သီးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှာ mini ကိုဂေါက်သီး၏စင်ပုံစံဖန်တီးချင်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်သင်ပျော်စရာနှင့်စိတ်ပျက်နှစ်ဦးစလုံးရှာလျှင်, Vista ကဂေါက်သီးရိုက်သင့်ရဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှု Mode ကို: တစ်ခုချင်းစီကိုရက်သတ္တပတ်သုံး 18-ပေါက်သင်တန်းများဖြတ်ပြီးထိပ်အစက်အပြောက်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။ တစ်ဦးချင်းစီရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးမှာသုံးခေါင်းဆောင်များသရဖူရရှိနေကြပြီး, သုံးလှပသောအသစ်သောသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
အဆုံးမဲ့ Mode ကို: နည်းနည်းအနားယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနည်းငယ်-ပိုကြီး-ထက်စည်းမျဉ်း-size ကိုအဆုံးမဲ့သင်တန်းအပေါ်အဖြစ်ဝေးသင်ချင်ပါတယ်အဖြစ်ကစား။
-Infinite mode ကို!
-Simple ဆွဲ-and-shoot ကင်ထိန်းချုပ်မှု!
-Rename ဂိမ်းသည် Modes
-Make Mulligan / တိုတောင်းကြော်ငြာတွေကိုပြန်လုပ်ရန်
-Other သေးငယ်တဲ့ bugfixes
41.89 ကို MB
shallots ဂိမ်းများ, LLC
လမ်းမကြီးခရီးစဉ် - ...